Dhageyso: Mooshin laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle | kowtharmedia.com
Home WARAR Dhageyso: Mooshin laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle
Dhageyso: Mooshin laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle
Jun 12, 2017WARAR
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada jowhar ayaa waxa ay mooshin ka keenay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi.
Mooshinka ayaa yimid ka gadala markii guddoonka baarlamaanka uu si deg deg ah usoo afjaray kulan xasaasi ah oo xildhibaanada baarlamaanka ay maanta yeesheen kaasi oo arimo xasaasi ah ay uga hadlayeen.
Xildhibaanada oo ka careysan sida guddoonka uu kalfadhiga usoo afjaray ayaa waxa ay bilaabeen in ay mooshin ka qoraan guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle waxaana ay u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka.
Guddoomiyaha waxaa mooshin ka geeyay illaa 47 xildhibaan oo 39 ka mid ah ay qalinka ku duugeen.
Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa qabtay mooshinka ay Xildhibaanada ku dalbanayeen in shaqo joojin lagu sameeyo Guddoomiyaha,
Xildhibaan Maxamed Qaasim Daqare ahna Wasiir ku xigeenka Wasaarada Bey’adda Maamulka Hir-Shabeelle ayaa sheegay in mooshin laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeele.
Xildhibaan qaasim wuxuu intaa ku daray in uu baaqday kulan maanta golaha wasiirada hirshabeelle ay ku yeelan lahaayeen dagmada balcda dibna uu u dhacay ilaa qamiista.
Previous PostDaawo Sawirro: R.Wasaareyaasha Soomaaliya iyo Itoobiya oo yeeshay kulan looga hadlayey Xoojinta xiriirka labada dal. Next PostDEG DEG: Magaalada muqdisho oo laga maqlay madaafiic lagu garaacay isbartiibada.....